Discord yakakurumidza kuve muyero wegoridhe wekuvaka mitambo yemitambo neyemagariro kubvira payakatanga muna 2015. Iine zvinhu zvinoverengeka zvinobatsira zvinobvumidza vashandisi vayo kuti vagare vachikurukura vari kure neshamwari nevasingafungi, vane kugovana kwescreen nezwi kana vhidhiyo kutaurirana inopihwa mahara.
Nehurombo, vamwe vashandisi veDiscord vanoedza kufona nezwi vanozoona iyo "RTC yekubatanidza" kukanganisa kuoneka kunoratidzika kunge kunodzivirira kufona kuti isabatana. Kukanganisa "RTC kubatanidza" kukanganisa kunogona kukonzerwa nenyaya dzinoverengeka, asi zvinogona kugadziriswa. Kana iwe uchida kugadzirisa iko kukanganisa paDiscord, hezvino izvo zvauchazofanira kuita.
Chii Chinonzi Discord "RTC Kubatanidza" Kanganiso uye Chii Chinokonzera Iyo?
Kana iwe ukaona "RTC ichibatanidza" paDiscord, zvinowanzoreva kuti pane dambudziko rinodzivirira iyo WebRTC (Web Real-Nguva Kutaurirana) protocol kubva mukugadzira kubatana pakati pako nemaseva eDiscord kubvumira yako yekutaura kwenzwi kuitike.
Dzimwe nyaya, dzakadai seyakajairika "hapana nzira" yekukanganisa, zvine chekuita nenyaya imwechete iyi, neDiscord isingakwanise kumisa kubatana pakati pekomputa yako nemaseva ayo. Pasina kubatana kwakadzikama kubva kuDiscord kuenda kuPC yako, chero kuyedza kwekumisikidza kubatana kwenzwi kana vhidhiyo kutaurirana kuchatadza.
Kunyangwe kubviswa kweDiscord dzimwe nguva kungave iri dambudziko, vashandisi vazhinji vanozoona kuti Discord "RTC yekubatanidza" yekukanganisa inonongedza kune yemuno network nyaya. Muchiitiko chekutanga, kutangazve PC yako kazhinji inhanho yekutanga yakanaka, sezvo izvi zvichimanikidza PC yako kuti ibatanidzwe kunetiweki yako yemuno.
Zvese kubva yakavharwa network ports kune yakashata DNS cache inogona kukonzera Discord izwi kutaurirana kutadza, zvakadaro. Kana kutangazve PC yako isingashande uye uine chokwadi chekuti yako internet yekubatanidza yakagadzikana, ungangoda kuyedza nhanho pazasi kuti uwane yako Discord izwi kutaurirana kushanda zvakare.
Tarisa Discord's Service Mamiriro
Usati watarisa chero mamwe marongero, iwe unofanirwa kusimbisa kuti dambudziko riri kumagumo ako. Discord kubuda, nepo zvisingawanzoitika, zvinoitika nguva nenguva, zvichitadzisa vashandisi kushandisa chikuva. Uku kunogona kunge kuri kudzima kudiki kunodzivirira kutaurirana kwezwi nevhidhiyo, kana kunogona kukumisa kuti ubatanidzane sevhisi zvachose.
Kuti utarise mamiriro ebasa reDiscord uye utonge kubuda, enda ku Discord Status webhusaiti. Ita shuwa kuti iyo API chikamu chakanyorwa se Operational (inoratidzwa segirini). Partage inobuda ichaonekwa seorenji, nepo kuzadza kuzere kuchizoita sekutsvuka.
Pane peji rimwe chete, peta pasi uye vhura iyo izwi chikamu. Izvi zvichavhura runyorwa rweseva matunhu. Tarisa uone kuti dunhu rako rakanyorwa se Operational. Kana zvisiri, unogona kukwanisa kuchinjira kune imwe nharaunda kwenguva pfupi kuti udarike izvi uchishandisa matanho akatsanangurwa mberi pazasi.
Kana Discord irikunetsa, ibva waenda kweawa kana maviri. Dambudziko rinofanira kugadziriswa nenguva yaunodzoka muzviitiko zvakawanda.
Dzvanya Kubva kuVPNs uye Vhura Network Zviteshi
Kana iwe uri kushandisa virtual private network (VPN) paPC yako, saka zvinogona kuti izvi zviri kuvharira kubatana kwako neDiscord server, zvichikonzera "RTC yekubatanidza" kukanganisa mukuita. Saizvozvo, kana iwe uri kushandisa network firewall (kana Windows firewall), madoko akavharwa anogona kudzivirira Discord kushanda nemazvo.
Discord inoshandisa a zvisina kujairika UDP port pakati 50,000 uye 65,535 kumisikidza kutaurirana kwezwi. Nekudaro, yako PC kana Mac inowanzo bvumidza kupinda kune ino isina kujairika chiteshi otomatiki Ichi ndicho chimwe chezvakanaka zveWebRTC protocol Kana ikasaita, ungangoda kumisikidza yako router kuti ibvumidze iyo panzvimbo.
Kunyangwe zvisingakurudzirwe kungovhura hombe chiteshi renji seizvi, unogona kugona shandisa chiteshi kuendesa pane yako router kutungamira iyi traffic kune chiteshi chimwe chete kana chiteshi chengarava, icho chaunogona kuongorora (uye kudzika) inopinda traffic kuDiscord chete.
Kana iwe uri kushandisa VPN uye traffic yakavharika, zvisinei, ungangoda kukatanura uye kushandisa Discord pasina iyo. Neimwe nzira, iwe unogona kuchenesa mamwe madoko kana sevhisi ikubvumidza iwe kuti uite kudaro, asi iwe uchafanirwa kubvunza yako VPN sevhisi kuti uone kuti izvi zvinogoneka.
Chinja Discord Server Dunhu, Audio Subsystem uye Hunhu hweSevhisi (QoS) Zvirongwa
Discord ine marongero akati wandei anogona kukanganisa kutaura kwenzwi. Semuenzaniso, maSeva eDiscord akaiswa mumapoka enzvimbo dzevhavha, kuve nechokwadi chekuti latency pakati pevashandisi nemaseva eDiscord ishoma. Kana dunhu rako riine nyaya, zvakadaro, unogona kuchinjira kune imwe nharaunda kwenguva pfupi kugadzirisa dambudziko.
Iwe unogona zvakare kushandura yako Discord yemhando yebasa (QoS) uye odhiyo subsystem marongero. Izvi zvingangoderedza huwandu hwese, asi zvinofanirwa kubatsira kumisikidza kubatana kana Discord "RTC Kubatanidza" kukanganisa kuri kuramba kuripo. Iwe unozongogona chete kushandura aya akasarudzika marongedzero muDiscord desktop app, zvakadaro.
Kuti uchinje server yako dunhu mubrowser yako kana muDiscord desktop app, vhura iyo app (kana shanyira iyo Discord webhusaiti) uye kusaina. Ukangopinda iwe, sarudza zita rako sevha kumusoro-kuruboshwe, wobva wasarudza Zvirongwa zveSeva kubva pamenyu.
Mu Muongorori weServer menyu, sarudza iyo chinja bhatani reiyo Dunhu reSeva sarudzo yekuchinjisa server yako kune imwe Discord server dunhu. Izvi zvinongogoneka kana iwe uri mutariri pane iyo server, zvisinei, pamwe nekugadzwa kunoshanda kune vese vashandisi vakabatana.
Kana iwe uri kushandisa iyo desktop desktop, iwe unogona kuchinja yako mhando yebasa uye odhiyo subsystem marongero. Kuti uite izvi, vhura iyo app uye sarudza iyo marongero cog muzasi-kuruboshwe.
Mune menyu, sarudza Izwi & Vhidhiyo, yakanyorwa pasi pe App Settings chikamu. Kuruboshwe, ita shuwa yekusarudza iyo Gonesa Hunhu hweSevhisi Yakakwira Packet Kukosha inotsvedza, kuchichinjisa ku Off Nzvimbo.
Mune imwechete menyu, pfuurira pasi kune iyo Audio Subsystem chikamu. Uchishandisa iyo inodonhedza menyu, chinja kubva Standard to Nhaka.
Bvisa DNS Cache
Iyo DNS (Domain Name Server) cache inoshandiswa kubatsira maapps paPC yako (senge Discord) kugadzirisa mazita emazita (senge discord.com) kune akakodzera IP kero. Kana iyo DNS cache yakaora, Discord inogona kunge iri kuyedza kubatanidza kune isiriyo kero, ichivhara kutaurirana kwezwi semhedzisiro.
Kubatsira kugadzirisa izvi, uchafanira bvisa iyo DNS cache papuratifomu yako.
Windows vashandisi vanogona kuita izvi nekuvhura idzva PowerShell hwindo. Dzvanya-kurudyi Mutangi menyu uye sarudza Windows PowerShell (Admin) kuita izvi. Muwindo rePowerShell, mhando ipconfig / flushdns uye sarudza pinda kuti asimbise.
PaMac, vhura iyo itsva terminal hwindo uye mhando sudo dscacheutil -flushcache; sudo kuuraya -HUP mDNSResponder kuita zvakafanana, kusarudza pinda kumhanya kuraira.
Paunenge iwe wabvisa cache, edza kufona rimwe izwi muDiscord kuti utarise kuti iri kushanda zvakare. Iwe unogona zvakare kushandisa iyo WebRTC Troubleshooter bvunzo kusimbisa kuti bhurawuza rako rakarongedzwa nenzira kwayo kubvumira WebRTC kufona (senge Discord izwi kufona).
Kugadzirisa Nyaya Dzakajairika neDiscord
Nepo kukanganisa kwe "RTC kubatanidza" paDiscord kunogona kutsamwisa kubata, matanho ari pamusoro anofanira kubatsira kuagadzirisa kune vazhinji vashandisi. Dzimwe nyaya dzeDiscord, senge yakanamatira kubatanidza skrini panguva yekusaina kana nyaya dzemarobhoti panguva yekurarama chats, inogona zvakare kugadziriswa nekutevera matanho akafanana, sekushandura server dunhu uye QoS marongero.
Kana iwe uri seta yako Discord server uye urikutsvaga kuti uwane zvakanyanyisa kubva kusevhisi, ungangoda kufunga nezvekuisa Discord bot. Aya mabhoti anosimudzira mashandiro eDiscord, achikupa yekuwedzera moderation maficha kana uri kubata nevashandisi vasingadzoreki kana ichikurega uchitamba mimhanzi yako wega kubatsira kurarama zvinhu kumusoro.
Chii chinonzi Discord uye maitiro ekuishandisa: Iyo yemahara yekukurukurirana app yevatambi vakaongorora
Discord Stream Haina Ruzha? 6 Nzira dzekugadzirisa
Maitiro Ekuisa Discord Chikumbiro muUbuntu uye Mamwe maLinux Distribution [3 Nzira]
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Discord yeLinux
Discord yekubuda kwepaketi kurasikirwa: Chii uye maitiro ekugadzirisa?